Akhriso: Kulanka Farmaajo iyo Uhuru oo Looga Hadlay Kiiska Muranka Badda – Goobjoog News
Kulan goordhow soo dhamaaday oo dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu sheegay in labada dal iska afgarteen arrinta badda.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay in Madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay sida uu uga rajo weyn yahay in kiiska badda ee maxkamadda yaalo lagu xaliyo qaab ay labada dhinac raali ka yihiin, oo aan saameyn xiriirka labada dal.
Isla kulanka waxaa la sheegay in la fududeynayo socodka oo diyaaradaha toos uga degi doonaan Joma Kenyatta, fiisayaadha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha rayidkana lagu qaadan doono isla garoonka.
Warar ay heshay Goobjoog News ayaa sheegaya inuu jiray kula qarsoodi ahaa oo 24-kii saac ee lasoo dhaafay dhexmaray labada Madaxweyne iyaga oo isla meel dhigay qodobada maanta la sharciyey iyo qaar la qariyey. Xiriirka labada dal ayaa aad u xumaa tan iyo February ee sanadkan, taasi oo keentay In Nairobi qaado talaabooyin waali ah, waxaase muuqato in Kenya ay aragtay isbadal dhanka Soomaalida.
Qofkii xoolo daajiya agagaarka seeraha la mamnuucay daaqiddiisa, waxaa looga yaabaa in xoolihiisa ku fakadaan seeraha oo ay daaqaan.
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.
Farmaajo wuxuu ag daaqayaa seerihii xadiiskan lagu mamnuucay.
Kenya waxaysan marnaba raalli ka noqoneyn in dawada badda lagu dhammeeyo Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda (Internationla Court of Justice). Farmaajana waxaa laga saxiixay, afkiisana uu ku qirtay, in dacwadaas laga yeelayo si’ ay labada dal raalli ka yihiin oo aan waxyeelin xiriirka labada dal. Taasi hal micne uun bay yeelan kartaa: waa dacwadii oo laga soo celiyo Maxkamadda ICJ ee Hague.
Propecia Sample Pack Clomid Mois Ovulation Misoprostol Medsafe [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] isotretinoin 10mg no prior script Vente Kamagra Cameroun How To Buy Stendra Ed Drugs
Vet Keflex [url=http://viacialisns.com/#647]Cialis[/url] Tadalis Sx Soft Drug Cialis Propecia Dry Scalp
Amoxicillin Dosages [url=http://buycialisuss.com]Buy Cialis[/url] Amoxicillin Generique Suisse Cialis Amoxicillin Generique 20mg
levitra discount canada http://zithazi.com – cheap zithromax buy generic viagra new zealand
Fbdiil jukdxv US cialis cialis super active
Fgywja cbhgsw Buy discount cialis price of cialis
Zcjqkf qkxuzw Brand viagra cialis without a prescription
Dyegok zuaizd Order viagra usa otc cialis
Gmmzti rvqbap generic viagra online best online pharmacy
http://cbdoilforsalerate.com/ cbd oils...